emergency rental assistance/somali
Emergency Rental Assistance Somali
Sharcigu wuxuu kordhiyaa ilaalinta kiraystayaasha 60 maalmood ilaa 90 maalmood
Talaadadii, Sebtember 21, 2021, Guddiga Wakiillada Degmada Washington waxay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen Xeerka Degdegga ah ee 880 kaas oo kordhin doona muddada 60 maalmood ah ee ilaalinta kiraystaha ee Xeerka Senate 278 (2021) illaa 90 maalmood. Waxay waxtar leedahay isla markiiba.
Markii la qaatay qawaaniinta degmadda, kiraystuhu hadda wuxuu lahaan doonaa 90 maalmood oo ka -badbaadin ah halkii uu ka ahaan lahaa 60 maalmood oo badbaadin ah, ka dib markii kiraystuhu tuso mulkiilaha caddaynta codsiga kaalmada kirada. Marka codsiga la dhammeeyo, kiraystayaashu waxay heli doonaan ogeysiis ah in arjiga la helay. Kireystayaashu waa inay la wadaagaan xaqiijinta mulkiilaha si looga ilaaliyo ka -bixitaanka kirada bixin -la'aanta 90 maalmood oo dheeri ah haddii ay ku nool yihiin Degmada Washington ee aan la wadaagin iyo 60 maalmood haddii ay ku nool yihiin aagagga kale ee la isku daray ee degmada.
Si loo caawiyo fahamka xuduudaha awoodda, shaqaalaha Degmadu waxay abuuri doonaan khariidad si loo xaqiijiyo u-qalmitaanka 90-ka maalmood ee kordhinta. Boggan si joogto ah u hubi si aad u hesho muujinta khariidaynta.
"Faafidaani cudrka waxay khatar gelisay caafimaadka beesheena oo kaliya laakiin sidoo kale wanaagsanaanta dhaqaalaheena, iyo saamaynta labaduba waxay u dhigantaa kuwa taariikh ahaan aan u qalmin jiilalka," ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Degmada Kathryn Harrington. “Waxaan ognahay in 40% guryaha kirada ah ay ku jiraan Degmada Washington oo aan cidna la socon, joojinta dheeraadka ah ee uu oggolaaday sharciga gobolku waxay siin doontaa kumanaan ka tirsan bulshadeena fursad ay ku joogaan guryahooda iyagoo sidoo kale siinaya waqti dhaqaalaha maxalliga ah si aan dib ugu dhisno shaqooyinkii loo baahnaa iyo aqoonsiga ilaha dakhliga. ”
Bishii Agoosto, Maxkamadda Sare ee Mareykanka waxay ku dhufatay kordhinta joojinta ka -saaridda federaalka oo ay meel -mariyeen Xarumaha Xakamaynta Cudurrada Mareykanka (CDC) iyo Ka -hortagga taas oo ka tagtay qaar ka mid ah kireystayaasha Degmadda Washington oo wajahaya in laga saaro. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah dib -u -dhaca codsiyada heer gobol iyo degmo ilaa bixinta lacag bixinta, awoodda lagu maareeyo mugga codsadayaasha iyo sidoo kale kala duwanaanshaha jinsiyadeed ee uu muujiyey masiibada cudurka.
Ururka Waxqabadka Bulshada ee Degmada Washington wuxuu la shaqeynayay wakaalado u gaar ah dhaqan ahaan iyo xiriirka caafimaadka dadweynaha oo baafinaya shaqaalaha si loo farsameeyo codsiyada. Ballaarinta dadaalladan ayaa weli la sii baadhayaa. Macluumaad ku saabsan kaalmada kirada degdegga ah iyo ilo kale booqo www.co.washington.or.us/Housing/ ama la xiriir 2-1-1 khadka internetka www.211info.org ama adiga oo waca 2-1-1.
Qaadashada xeer -hoosaadka, guddigu wuxuu u dhaqmay sidii Guddiyada Gobolka ee ma aha maamulka caafimaadka ee deegaanka. Sidaas darteed xeerku wuxuu khuseeyaa oo keliya meelaha aan la wadaagin ee degmada. Magaalooyinku waxay qaadan karaan qawaaniin la mid ah si ay u ilaaliyaan deganayaasha aagagga la dhexgaliyay.
Wax intaas ka badan Waxaan ku dhiirigelineynaa dadka deggan Degmada inay codsadaan barnaamijka Kaalmada Kirada Degdegga ah. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida loo dalbado kaalmada kirada degdegga ah, raac xiriirkan https://www.co.washington.or.us/Housing/COVID-19/index.cfm ama booqo bogga Waxqabadka Bulshada si aad u hesho caawimaad gudbinta codsiga gargaarka kirada degdegga ah https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.html